नेपालकी पहिलो मिस नेपाललाई घोडा सिकाउँदै राजेन्द्र खड्गी, श्रीमान् पनि फिल्म खेल्दै (हेर्नुस् भिडियो) – Gazabkonews
काठमाडौं– द्धन्द निर्देशक एवम् नेपाली फिल्मका चर्चित भिलेन राजेन्द्र खड्गीले ‘रजतपट’मा प्रकाश सुवेदीसँग दिएको अन्तर्वाताले सामाजिक संजालमा खुब चर्चा पायो । ट्रोलदेखि टिकटकसम्म बने ।
टिकटक बनाउनेको भिडमा एक पात्र थिइन्, नेपालकी पहिलो मिस नेपाल रुबी राणा । टिकटक बनाएको भोलिपल्ट रुबीको नयाँ नम्बरबाट फोन आयो । कसैले भन्यो– म राजेन्द्र खड्गी ।
नाम सुन्नासाथ रुबीको सातो गयो । लाग्यो, अब दाइले गाली गर्नुहुन्छ । तर, त्यस्तो भएन । खड्गीले उल्टै रुबीलाई आफ्नो म्यूजिकल फिल्म ‘चिक्वा चाको पैसा खान गाह्रो’ मा सिआइबीमा कार्यरत महिला प्रहरी अधिकारीको भूमिका अफर गर्न पनि फोन गरेका रहेछन् ।
टिकटक गरेवापत फिल्म उपहार पाएकी रुबी शनिबार खड्गीसँग काठमाडौं, गोकर्णेश्वरस्थित हर्स स्टेबलमा घोडा दौडाइरहेको भेटिइन् ।
घोडा सिक्ने क्रममा के–के भयो ? खड्गीले रुबीलाई किन र कसरी घोडा सिकाए ?
बाँकी हेर्नुस् भिडियोमा रमाइलो दृश्यसहित कुराकानी ः